गर या मरकाे अवस्थामा वामदेव गाैतम
कृष्ण गिरी २५ असाेज
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम पुन केहि दिन देखि चर्चाको शिखरमा छन् । उनको चर्चा अहिले मिडिया देखि सामाजिक संजालमा भइरहेको छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा लागेका गौतमलाई कुशल संगठक पनि मानिन्छन् । उनले भूमिगत कालदेखि शान्तिकालसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा काम गरका हुन ।
माले हुँदै एमाले बनेपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको कम्युनिस्ट खेमामा उनको भूमिका धेरै रहेको थियो । उनले गरेका धेरै सकारात्मक कामहरुको भन्दा पनि अहिले उनले बर्दियाबाट संसदीय चुनावमा हारेर पनि सांसद हुन गरेको मरिहत्तेका कारण चर्चा भएको छ ।
एक बर्ष पहिला अथवा २०७४ साल असोज १७ गते संयुक्त भएर चुनाव लड्ने घोषणा गरेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरुको सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउने व्यक्ति गौतम नै हुन । त्यहि सहकार्य अहिले आएर पार्टी एकता बनेको छ ।
तर सहकार्य हुँदा पनि सचिवालय सदस्य रहेका गौतम र अर्का सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनाव हारे । दुबै जना पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष थिए । अहिले सचिवालयमा छन् ।
सबैको निशानामा गौतम
चुनाव हारेर सबै आ –आफ्नै काममा लागे । तर गौतमले भने चैनको सास फेर्न सकेनन् । देश भरी सबै नेताहरु जित्दा उनेले बर्दियाबाट हारे । त्यहि हार अहिले गौतमलाई सबै भन्दा पिडादायी बनेको छ ।
उनलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व बर्दियाका केहि जिल्ला नेताहरु भेट्न भैसेपाटी गएका थिए । उनीहरुको गुनासो थियो टिकट वितरणमा न्याय भएन सकिन्छ भने मिलाउनु पर्छ ।
तर गौतमले आदेशात्मक भाषामा भने अहिले जे भयो त्यहि ठिक छ । संसदीय निर्वाचनमा मैले जितेपछि प्रधानमन्त्री हुन्छु र सबैलाई हेर्छु । अहिले जानुहोस चुनावमा खट्नु होस ।
न्याय माग्न गएका बर्दियाका नेताहरु गौतमका वाणीबाट रन्थनियर जिल्ला फर्के । उनको मनमा गढेको गौतमको बोलीको बदला लिन धेरै समय लागेन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करीब ६ महिनापछि संघीय संसदको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट उमेदवारी दिए । तर चुनाव परिणाम उनको प्रतिकुल आयो अथवा उनले संजय गौतमसंग ७ सय ५३ मतले हारे ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यहि भएर पनि पूँजीवादीहरुले पनि आवधिक निर्वाचनको जनमतलाई मानेर जान्छन् । पूँजीवादीहरुको लोकतन्त्रको सबै भन्दा ठूलो कुरा यहि निर्वाचन हो । जिते शासन गर्ने हारे थपक्क पाँच बर्षसम्म बस्ने ।
र कम्युनिस्ट भएर पनि अझै त्यहि आवधिक निर्वाचनको धज्जी उडाउने काम भएको भन्दै गौतमको र नेकपाको आलोचना भइरहेको छ ।
जनताले पाँच बर्षकोलागि अविष्कार गरेका गौतम किन फेरी उपनिर्वाचन गराएर भएपनि सांसद हुन चाहन्छन ? सबैको एउटै प्रश्न छ ।
जब कि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गौतम धेरै पटक सांसद बनेका छन् । उनी उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पटक पटक बने । अझै उनलाई किन सत्ताको मोह त ? सबैको प्रश्न हो ।
उनको विरोधमा आम सर्वसाधरण मात्र होइन । उनको पार्टीका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल पनि खुल्ला रुपमा बोल्न थालेका छन् । नेकपाका अन्य कार्यकर्ताहरु पनि सामाजिक संजालमा उनको विरुद्ध लेख्न थालेका छन् ।
उनले हारलाई सजिलै पचाउन सकेका होइन अथवा उनको अब प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकाँक्षा हो ?
यदि हो भने उनको यो यात्रा चुनौति पूर्ण रहेको छ । बुधबार नेकपाका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष र अर्का नेताले दुबै अध्यक्षलाई भेटेर वामदेवलाई काठमाडौं ७ बाट चुनाव लडाउनु हानिकारक हुने भन्दै नउठाउन सल्लाह दिएका थिए ।
हिजो नै काठमाडौका मानन्धर समुदायले दिएको सम्मान रामवीर मानन्धरबाट फिर्ता लिने कुरा सम्म आयो । यदि यहि अवस्था उपनिर्वाचनसम्म रह्यो भने गौतमलाई यो यात्रा सहज हुने छैन ।
उनको विरोध पार्टी भित्र,मतदाता र अन्य शुभचिन्तकबाट भइरह्यो भने चुनाव जित्न सहज हुने छैन । चुनाव पनि नजित्ने हो भने जिवन भरी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका गौतमको लागि कलंक नै हुने छ ।
उनीलाई अहिले पदलोलुपताको आरोप लागेको छ । चुनाव हार्दा पनि चुप नबसेर जसरी हुन्छ पुन चुनाव लड्न खोजेको छ । हुन पनि उनको पछिल्लो एक बर्ष कसरी र कहाँबाट चुनाव लड्न पाइन्छ भनेर बित्यो । कहिले बाँके,कहिले पूर्वी रुकुम कहिले डोल्पा त कहिले इलाम ।
अहिले काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् ।
जसमा गौतमको नै जोडबल रहेको छ । यदि उनको राजीनामा पार्टी सचिवालयबाट स्वीकृत भएन भने गौतमको सबैभन्दा लाज हुने. छ । किन कि मानन्धरको राजीनामा उनको र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको डिजाइनमा आएको हो ।
यदि मानन्धरको राजीनामा स्वीकृत भएपनि गौतमलाई चुनाव जित्न सहज भने हुने छैन । पैसाले मात्र चुनाव जितिदैन । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने कैलाली क्षेत्र नं ५ बाट आरजु राणा देउवाले चुनाव जित्थीन ।
यसबाट पनि शिक्षा लिनु पर्छ । यहि भएर होला अहिले देखि नै गौतमलाई चुनाव जितिदैन नलड्न भन्दै सुझाव दिन काठमाडौंका नेताहरु नै लागेका छन् । नेकपा कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्घाखाचिका जिल्ला नेता रावबहादुर चौहानले त गौतमलाई चुनावमा नउठाउन लिखित नै असहमति पत्र पार्टी कार्यालय धुम्बाराहिमा दर्ता गराएका छन् ।
स्रोतले भन्यो उनले नउठाउनु पर्ने कारण सहित निवेदन दिएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भने एक तिरले दुई सिकार गरेका छन् । पछिल्लो समय ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका योगेश भट्राईलाई मन्त्री बनाउने वचन दिएका छन् । अर्को उनले भने गौतम हार्ने गरी उपनिर्वान हुँदैन । माधवकुमार नेपाल निकट भट्राईलाई मन्त्री
बनाएर गौतमलाई चुनावमा सहयोग हुने उनको बुझाई रहेको छ ।
तर अहिले सबै भन्दा बढी चुनौति नेकपा भित्रबाट नै छ । उनी अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । उनलाई चुनावमा हराउन नेकपा भित्रका मानिस लाग्ने देखिन्छ ।
तर उनले एमालेलाई यो देशमा स्थापित गर्न गरेको योगदान को अवमूल्यन एमालेले नै गर्न थालेका छन् । हो उनले ठूलो एमालेलाई विभाजन पनि गराएका हुन ।
उनले २०५४को स्थानीय तहमा एमालेलाई स्थापित पनि गराएका हुन । एकले अर्काको कार्यकर्ताको हत्यासम्म गरेका एमाले माओवादी केन्द्रबीच एकता पनि गराएका हुन । तर उनको पछिल्लो पदलोलुपताले उनको योगदानलाई छाँयामा पर्न थालेको छ ।
नेकपाका एक जना स्थायी समिति सदस्यले भने‘जिवनको उतरनद्धमा मानिसमा लोभ पलाउछ भन्थे त्यो वामदेव गौतममा देखियो । उनी उप्रधानमन्त्रीसम्म भएका मानिस हुन । अब हुने उनी कि प्रधानमन्त्री हो । जुन त्यति सहज छैन ।’ वामदेव हारे पनि वदनाम हुन्छन् जिते पनि वदनाम हुन्छन् ।